एनआईबिएल प्रगति फण्डको नाफा बढ्यो
चैत ११, काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको एनआईबिएल प्रगति फण्डको नाफा बढेको छ । माघ महीनाको तुलनामा फागुन महिनामा फण्डको नाफा बढी भएको हो ।
एनआईबिएल प्रगति फण्डले माघ महीनासम्म रू.१० करोड ९ लाख १२ हजार नाफा गरेकोमा फागुन महीनामा रू.१० करोड ८६ लाख ३४ हहजार नाफा गरेको छ ।
उक्त फण्डले फागुन महीनामा रू. ११ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ भने रू.९४ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ । माघ महीनामा एनआईबिएल प्रगति फण्डको आम्दानी रू.१० करोड ९३ लाख २४ हजार थियो भने रू. ८४ लाख १२ हजार खर्च भएको छ ।
प्रतिइकाई खुद मूल्य रू.९ दशमलव ७३ कायम भएको छ । माघ महीनामा यो मूल्य रू. ९ दशमलव ६३ थियो । एनआईबिएल प्रगति फण्डले फागुन मसान्तसम्म धितोपत्र दलाल कमिसन सहित रू. ७१ करोड ८६ लाखभन्दा बढी कुल लगानी गरेको छ । फण्डले सूचीकृत तथा सूचीकृत हुन बाँकी शेयरमा उक्त रकम लगानी गरेको हो ।
फण्डको वित्तीय विवरण अनुसार लगानीको बजार मूल्य भने कम रहेको छ । माघ महीनासम्म रू. ६५ करोड २८ लाख भन्दा बढी बजारमूल्य रहेकोमा फागुन महीनासम्म यो मूल्य रू.६६ करोड ७८ लाखभन्दा बढी कायम भएको छ । फण्डको बैंक मौज्दात रू. ५ करोड १८ लाखभन्दा बढी छ ।
तथ्यांकमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण (अपडेट )[२०७६ चैत, २४]
कोभिड–१९ का बिरामीहरु ओसार्न नास र सीएमसीसीबीच सम्झौता[२०७६ चैत, २४]
कञ्चन बैंकद्वारा दसरथचन्द नगरपालिकालाई ३५ हजार सहयोग[२०७६ चैत, २४]
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आईपीओको बाँडफाँट बुधवारनै गर्ने [२०७६ चैत, २४]
आउने दुई साता राष्ट्रकै लागि चुनौती : प्रधानमन्त्री[२०७६ चैत, २४]
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा कोरोना कोषमा १ करोड सहयोग[२०७६ चैत, २३]
लकडाउन थपिने भएपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आईपीओ बाँडफाँट गर्दै[२०७६ चैत, २३]
शेयर कारोबार बन्दको असर : व्यवसायिक रुपमै लाग्नेहरु तनावमा[२०७६ चैत, २३]
३५०० पर्ने थर्मल गनलाई १५ हजारमा बेचेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ
लकडाउनका कारण रोकिएको अरुण तेस्रोको काम शुरु
भारतमा सरकारले घटायो सांसदको तलब
तस्वीर : ज्योति ग्रूप स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै